Namuhla, i-pharmacy amaketanga bathole nencazelo ehluke ngokuphelele. Imithi isiba ngokukhangisa ngokuvamile benza ihaba ukusebenza kwabo, futhi abantu ngokuya wahlanganyela self-ukwelashwa, okwandisa ukufunwa amaqembu ahlukahlukene izidakamizwa. Thina Sebekhohlwe nya ngaphansi kwesimo ukuthuthukiswa omkhulu embonini eyenza imithi yezokwelapha phezu zokupheka kazwelonke ngokuvamile nethonya evelele kakhulu kunemithi zokwenziwa imvelaphi.
Eqinisweni, cishe zonke izimpawu isitshalo siyingxenye ye nendawo yokugcina izinto ezihlukahlukene ezinethonya ekwelapheni. Isibonelo okuphawuleka ingxube kuhlanganise lemon, uju, garlic. Indlela sokulungiselela yayo, uzofunda kamuva kancane, kodwa manje ake sixoxe ngayinye yezingxenye ngokwehlukile. Citrus - liyinqolobane Vitamin C, okuyinto oyenza isebenze umzimba ozivikela futhi ivikela ngesikhathi imikhuhlane. Garlic - kuyinto-antibiotic engokwemvelo zaziziningi nezinye izakhiwo ngokuyisimangaliso, nezinyosi - umkhiqizo of ukufuywa, okungaba inkulumo eside, sibhale uhlu izifo lapho kuboniswa.
Ukuhlanganisa kwelinye imoto umkhiqizo ezintathu kunazo owaziwa zisetshenziselwe imithi yokwelapha, siba elixir enamandla ukuthi uyakwazi ukwenza izimangaliso zokuphulukisa! Lemon, uju, nesweli - iresiphi for ingxube ilula kanye zonke izingxenye zalo. Uma ufunda izibuyekezo labo abahlola thuluzi ngokwayo, kungabonakala ekulenzeni libe namandla. Abanye bakhuluma ngokubi jikelele impilo ngcono, kanti abanye ayekile uhlushwa imikhuhlane njalo, abanye bathi energy ekhethekile "off". Abantu abaningi bakholelwa ukuthi uju, lemon, nesweli - the elixir zobusha, futhi ayikwazi ngokuthi ngenye indlela. Phela, leli imikhiqizo eziyinkimbinkimbi ahlanze semithambo odongeni, kususa cholesterol eziyingozi, disinfects igazi kuyasiqeda amaseli fat futhi kuthuthukisa umzimba. Njengoba ubona, uhlu izinzuzo kusukela amaningi elixir esenza ukuba ukhulume ngayo rejuvenation zomzimba.
a trio enjalo elula lemon, uju kanye garlic. iresiphi
Thatha izingcezu 10 of ulamula, 10 izinhloko garlic kanye eyodwa kilogram uju. izingxenye Sula futhi ahlanzekile bese ukulungiselela embizeni ingilazi lapho uqweqwe zizogcinwa. Kuze kube yimanje, kuhle ukugeza futhi yomile. Shutheka kalamula, garlic kanye inyama egayiwe. Beka lezi izithako emgqonyeni ukulungele futhi ugcwalise kubo uju. Phikelela izindlela kumelwe libe phakathi kwesonto, ukugcina lid ivaliwe endaweni emnyama. Kufanele kuthathe 1-2 amathisipuni izikhathi 3 ngosuku. Ukwelashwa kumele kutsatse izinyanga ezimbili, futhi imiphumela yokuqala sebeqala ukuba wazizwa emasontweni 2-3 kusukela ekuqaleni. Kufanele kukhunjulwe ukuthi ingxube garlic, lemon noju okufanele zithathwe ngokuqhubekayo.
Uma unomuzwa wokuthi unale nemali likhulu kakhulu, ukwehlisa izithako olinganise oyifunayo, kodwa uma umkhaya omkhulu, futhi le nombolo akuyona kakhulu kuwe - kabili izithako nokulungisa elixir zempilo!
Ngakho, konke okudingekayo - lemon, uju kanye garlic. Indlela sokulungiselela ilula, futhi baye bakwazi ukuqinisekisa lokhu. Leli thuluzi kufanelekile ekwelapheni okwathatha isikhathi eside kangako sibi zokuphefumula izifo ezibangelwa amagciwane e izingane. Umthamo Kunconywa izingane ineminyaka engaphezu kwemithathu - 2 amathisipuni ngosuku ngokungabi bikho komzimba. Ngaphambi kokuqala izifundo kumelwe bonana nodokotela wakho mayelana sekufanele awushiye ukusetshenziswa kwezimali.